Shina 2021 Ny tsenan'ny indostrian'ny taratasy any Sina mpanamboatra sy mpamatsy ny vidin'ny vidin'ny vidiny | Chang Liang
Taratasy fanariana lovia fisakafoanana
takelaka taratasy antoko
Taratasy Krismasy lovia fisakafoanana
Boaty sakafo antoandro
2021 China's Paper Industry Market Market Price Analysis
Nanomboka tamin'ny Febroary 2021, niverina tsikelikely ny PPI an'ny indostrian'ny taratasy, ary tamin'ny Mey 2021, ny PPI an'ny indostrian'ny taratasy dia hitombo 5.0% isan-taona. Izany dia noho ny fisondrotry ny vidin'ny pulp sy ny angovo eran-tany amin'ny fiakaran'ny famokarana taratasy, izay nampitombo ny vidin'ny famokarana ny tanindrazako.orinasa mpanao taratasy, nitarika ny fiakaran’ny vidin’ny taratasy.
Ny angon-drakitra fototra amin'ity lahatsoratra ity: Paper Industry PPI, Paper Industry Enterprise Operating Cost, Pulp Import Unit Price
Tsy mitsaha-miakatra ny vidin’ny taratasy ao an-toerana
Araka ny fiovan'ny vidin'ny mpamokatra (PPI) amin'ny indostrian'ny taratasy an-trano nambaran'ny Birao Nasionaly momba ny antontan'isa, manomboka amin'ny taona 2019 ka hatramin'ny 2020, ny PPI an'ny indostrian'ny taratasy nasionaly dia hitohy hatrany amin'ny fidinana, saingy hihena tsikelikely izany. niakatra nanomboka tamin'ny Febroary 2021 ka hatramin'ny Mey 2021. Nitombo 5.0% ny PPI indostrialy isan-taona tamin'ny volana.
Araka ny filazan'ny China Paper Association, nanomboka tamin'ny Aprily 2021, nitombo 10% -20% ny vidin'ny orinasa taloha amin'ny vokatra taratasy an-trano sasany; nitarikaorinasa taratasy fonosanadia samy mamoaka “taratasy fisondrotry ny vidiny” ihany koa. Tamin'ny 17 Mey, ny indostrian'ny taratasy famonosana Nine Dragons Paper, izay laharana faha-1 amin'ny famokarana ao an-toerana, dia nanomboka ny fihodinana fahatelo amin'ny fiakaran'ny vidiny tamin'ny volana Mey.
Fotoana fandefasana: Nov-03-2021
Aoka ho anisan'ny fomban-drazana
© Copyright - 2010-2022 : Zo rehetra voatokana.